Wos (muusikiiste) - Wikipedia
Valentin Oliva, (Buenos Aires, Argentina; Janaayo 23, 1998) farshaxan ahaan loo yaqaan Wos, waa cunsuri u dhashay Argentina iyo xaraash. Wuxuu caan ku yahay inuu u tartamo tartankii caalamiga ahaa ee Red Bull Battle of the Roosters 2018.
Wos wuxuu ka soo bilaabay da 'yar aad u da' yar oo kaqeybgalay wuxuuna kaqeybgalay tartamada sida El Quinto Escalón, halkaas oo uu horeyba u muujiyay karti aad u sarreysa iyo geesinimo badan. Laakiin waxay ahayd sanadkii 2016 markii uu muujiyey in heerkiisu uu ka badan yahay meel, sidaas darteed uu ku guuleystay dhowr taariikho oo ah Tallaabada Shanaad, isagoo tuuraya dhibco xusuus leh, kaasoo noqday viral on shabakadaha bulshada oo noqday horyaal taariikhda ugu dambeysa, isagoo ka tagaya Dtoke wareega hore iyo finalka Klan ayuu ka qaaday. Wos waa mid ka mid ah guuleystayaasha ugu guulaha badan tartanka El Quinto Escalón.
Sanadkii 2017 wuxuu ka qeyb galay tartankii Final-ka Qaranka ee 'Red Bull Battle' ee Roosters markii ugu horeysay, halkaas oo uu ugu soo muuqday horyaal, isagoo ka mid ah, Papo, mid ka mid ah musharixiinta wareega quarterfinals iyo Klan finalka, oo sidaas darteed, wuxuu u soo baxay inuu caalami ah oo ka dhacay Meksiko, oo ay kaalinta labaad ka ahayd Aczino.
Bishii Agoosto 9, 2019 wuxuu siidaayay cutubkiisii ugu horreeyay ee albumkiisii ugu horreeyay, Kangaroo, halkaas oo uu ku dhaleeceeyo siyaasiyiinta reer Argentine iyo fikirka "meritocracy." Laba maalmood ka dib wuxuu ka qaybqaatay baahinta telefishanka YouTube ee El Destape halkaas oo uu ku dhawaaqay sii deynta album ay ku jiraan 7 heesood waa dhow. Albumka ayaa la sii daayay horaanta bisha Oktoobar 2019 ee cinwaanka Caravan. Soo bandhigida rasmiga ah waxaa lagu qabtay Oktoober 11 iyo 12 Groove.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wos_(muusikiiste)&oldid=198849"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Febraayo 2020, marka ee eheed 17:18.